ဒီရက်ပိုင်း သတင်း မှားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မီးနိုကို လိုက်ဖမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ အဖြစ်မှန်ကို ပြောပြလာတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ…… – Shwe Naung
ဒီရက်ပိုင်း သတင်း မှားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ မီးနိုကို လိုက်ဖမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ အဖြစ်မှန်ကို ပြောပြလာတဲ့ ဆောင်းယွန်းစံ……
N N | June 30, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ် ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ် တွေရဲ့ အချစ်တော် မင်းသမီးချောလေး ဆောင်းယွန်းစံ ကတော့ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ကူး ထားသူဖြစ်ပြီးနောက် ပိုင်းမှာ ဆိုရင်တော့ ဇာတ်လမ်း တွဲတွေမှာ ပါဝင် ခဲ့တာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိ မှာတော့ ဆောင်းယွန်းက စားဝတ် နေရေး ခက်ခဲနေတဲ့ ပြည်သူများကို စေတနာ ရှင်များနဲ့ စုပေါင်းကာ အလှူ အတန်းတွေ ပြုလုပ်နေတာ ဖြစ်ပါ တယ်။
ထို့အတူ အဆိုတောျမီးနိုဟာ ဆိုရငျလညျး လကျရှိ ဖွစျပေါျနတေဲ့ အခွအေနတှေမှော လိုအပျနတေဲ့ ပွညျသူ တှအေတှကျ တတျနိုငျသလောကျ ဖေးမကူညီနပွေီး လတျတလောမှာ လူမှုကှနျယ ကျပွညျသူတှကွေား ပွနျ့နှံ့နတေဲ့ မီးနိုရဲ့ သတငျးတှနေဲ့ ပတျသကျပွီး ဆောငျးယှနျးစံက ဖွရှေငျးပွော ပွလာပါတယျ။
PDF တှကေို ရိက်ခာ ထောကျပံ့လို့ မီးနိုကို စစျကောငျ စီတပျတှေ လိုကျလံဖမျးေ နပါတယျ ဆိုတဲ့ ကောလဟလ သတငျးတှ နေဲ့ပတျသကျပွီး သူငယျ ခငြျးဖွစျသူ ဆောငျးယှနျးစံက အဖွစျမှနျတှကေို အောကျပါ အတိုငျး ပွောပွ ထားတာ ဖွစျပါတယျ။
” မီးနိုနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဒီရက်ပိုင်း သတင်းမှားတွေ ကိုတွေ့နေ ရတယ်..PDF တွေကို ရိက္ခာ ထောက်ပံ့လို့ စစ်သားတွေ လိုက်နေတဲ့အကြောင်း.. ဘယ်သူ စလိုက် မှန်းမသိပေမဲ့ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် အနေနဲ့ ရုတ်တရက် စိတ်ပူသွားတယ်.. ဒါပေမဲ့ မီးနိုက ဒီကာလမှာ စားဝတ်နေရေး မပြေလည်တဲ့ သူတွေကို ကူညီပေး နေတာပါ….
ခုလိုသတင်းအမှား တွေကြောင့် သူ့ကို အခက်အခဲတွေ မဖြစ်စေချင်ဘူး..စိတ်ပူပြီး တင်ထားတဲ့ သူတွေကိုလည်းပြန်ဖျက်စေချင်ပါတယ်..”ဆိုပြီးရေးသား ထားတာလေးကို
ပရိသတ်ကြီး အဖြစ်မှန်ကို သိစေရန် ပြန်လည်မျှ ဝေလိုက် ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စာဖတ် ပရိသတ် အားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာပြီး ဘေးကင်းပါစေလို့ ဆုတောင်းပေး လိုက်ပါတယ်။
မိုးမြင့်သဇင်ရဲ. ဖြူဖြူ ဖွေးးဖွေး ကောက်ကြောင်း ပုံရိပ်များ…
ကောလဟာလ သတင်းတွေ Speak Out တစ်ခါလုပ် ရင်အခကြေးငွေ သိန်း (၁၀၀)ယူတယ် ဆိုတဲ့ ချက်ကျလက်ကျ ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ ဆရာမ ချမ်းမြမြသော်….